श्वेता खड्काको प्रश्न : उहाँलाई गर्ने मायाको मापन पत्रकारको कलमले कसरी गर्न सक्छ ? – Hamrosandesh.com
श्वेता खड्काको प्रश्न : उहाँलाई गर्ने मायाको मापन पत्रकारको कलमले कसरी गर्न सक्छ ?
नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। २०७१ साल साउन २५ गते श्रीकृष्णको नि*धन भएको थियो।श्रीकृष्णको निधन भएको पाँच वर्ष पुग्दा श्रीमती श्वेता खड्का हाल बेल्जियम पुगेकी छन्। स्वर्गीय पतीको सम्झनामा स्थापित श्वेताश्री फाउण्डेसन मार्फत बनिरहेको माझी बस्तिको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन श्वेता बेल्जियम पुगेकी हुन्।उनले त्यहाँबाट फेसबुकमा एउटा लामो भावुक स्टाटस पोष्ट गरेकी छन्। जुन स्टाटस् आफू र परिवारले स्वर्गीय श्रीकृष्णलाई भुल्दै गएको भन्नेहरुप्रति लक्षित छ। साउन २५ गते एक अनलाइन मिडियामा प्रकाशित लेखप्रति उनको भनाइ लक्षित देखिन्छ ।
स्वर्गीय श्रीकृष्णसंगको तस्वीर सहितको स्टाटस मा उनले भनेकी छन्, –‘आफ्नो आत्मीय मान्छेलाई सम्झन कुनै बिशेष अवसर वा दिन चाहिँदैन । म त उहाँलाई हरेक पल, हरेक क्षण र हरेक दिन सम्झिरहेको हुन्छु ।’उनले यसवर्ष पुण्य तिथि साउन २९ गते परेको जनाउँदै कसैको भावनामा ठेस लाग्ने खालका समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेकी छन्। श्रीकृष्णको निधन तिथिअनुसार श्रावण शुक्ल चतुर्दशीको दिन भएको थियो । हिन्दू परम्परामा तिथिअनुसार वार्षिक पुण्यतिथिको संस्कार गरिन्छ ।
उनले अगाडि लेखेकी छन्, –‘चक्कु, खुकुरी, तलवार र काँडाहरु भन्दा पनि तिखो धार भनेको शब्दहरु नै हुन् । हतियारको धारले शरीरमा चोट पुर्याउँछ । जसको उपचार पनि सजह छ तर शब्दको धारले सिधै मन र मस्तिष्कमा चोट पुर्याउँछ, जसको उपचार कठिन छ ।’ उनले आफूले स्वर्गीय पतिलाई गर्ने मायाको मापन कुनै पत्रकारको कलमले गर्न नसक्ने बताएकी छन्।उनको स्टाटस् भाषिक शुद्धताबाहेक जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ :मैले के गुमाए र के पाएँ ? त्यसको हिसाबकिताव गर्ने हो भने यो उमेरसम्म आईपुग्दा जति पाएको छु त्यो भन्दा धेरै कुरा गुमाएको छु ।